Arch Linux + KDE Kuisa Log: Kuziva Misiyano | Kubva kuLinux
Arch Linux + KDE Kuisa Log: Kuziva Misiyano
Nezuro ndakaisa pane imwe yemakomputa pabasa rakakurumbira Rolling Release kugoverwa kwe GNU / Linux izvozvi: Arch Linux.
Basa racho rakanga risinganetsi, asi zvaive zvisiri nyore futi, uye mukuita izvi ndakadzidza zvinhu zvakawanda uye ndinoda kugovana chikamu cheruzivo rwakawanikwa nemi mose.
Ini ndinotanga nekutaura kuti kekupedzisira pandakaisa Arch Linux zvese zvaive nyore, asi kana wajaira nzira nyowani yekumisikidza, maitiro acho anokurumidza kwazvo. Fungidzira kuti uchiita zvese zvandichakuratidza gare gare, hazvina kunditorera anopfuura maminetsi mashanu kuti ndiiswe hwaro hwesisitimu nekushanda Ehe, ini ndine mamwe emunharaunda marekodhi, saka kunonoka kunenge kuri iko akaiswa mapakeji.
1 Chii chinonzi Debian (kana Mamwe maDistros) Mushandisi Anofanira Kuziva
2 Maonero angu uye yangu yekutanga kuonana
Chii chinonzi Debian (kana Mamwe maDistros) Mushandisi Anofanira Kuziva
Zvichida chinhu chakaomesesa hachisi chakanyanya kuiswa sekunzwisisa kuti zvinoshanda sei systemd. Kuedza kutsvaga fananidzo padyo sezvinobvira kune vashandisi ve Debian, Ndinokupa muenzaniso:
Patinoisa KDE uye kana uchitanga komputa KDM (kana imwe sevhisi) haitange, zvatinoita kumhanya paTTY:
Kana chii chakafanana:
Zvakanaka, mune iyo nyaya ye systemd kutanga isu tinofanirwa kugonesa sevhisi:
Parizvino zvese zviri nyore asi nyaya yacho inonetsa kupi? Zvakanaka, kune mamwe madhimoni akadai seayo NetworkManager, kuona iyo yapfuura muenzaniso mumwe angafunga kuti yakaitwa nekuisa:
kana chimwe chinhu chakafanana, asi hazvina kudaro, asi isu tinofanirwa kuisa:
Pane imwezve yakakosha mhedzisiro ine iyo nyaya yemambure. Kanganwa nezve ethX y wlanX, hapachina ifconfig, kana, kana pasi.. zvino zvinhu zvasiyana. Semuenzaniso, network yangu inopindirana, ese wired uye WiFi izvozvi zvinodaidzwa (nenzira iyi): enp5s0 y wlp9s0.
Tinoziva sei izvi kana isu tisisina ifconfig? Zvakanaka, uchishandisa rairo:
MuDebian kuvaka chinongedzo isu taifanira kungovhura terminal nekuisa:
Iye zvino kusimudza kana kudzima network sisitimu isu tinofanirwa kuzviita tichishandisa mirairo:
Kana isu tichida kumisikidza pamurume IP muDebian uye zvigadzirwa, isu tinongofanirwa kuisa:
Nekudaro muArch Linux isu tinofanirwa kushandisa rairo:
# ip link set enp5s0 kumusoro # ip addr wedzera 192.168.XX / 255.255.255.0 dev enp5s0 # ip nzira wedzera default kuburikidza 192.168.XX
Panyaya yeWiFi tinofanirwa kuuraya:
Kunyanya izvi ndizvo zvinhu zvinonyanya kusangana nemushandisi achibva Debian paunopinda munyika Arch Linux. Panogona kunge paine vamwe asi zvirinani kwandiri izvi ndizvo zvakakoshesa.
Ipapo, isu tinofanirwa kujairana nenyaya yekuti isu hatichashandisi:
Uye izvo zvatisingaise ne:
Ehe, kana ivo vakagadziriswa kudaro Kukodzera, tinogona kugara tichigadzira akati wandei ma aliases ekumhanya PacMan uchishandisa mirairo imwechete seyaDebian 😀
Uye pakupedzisira isu tinofanirwa kuyeuka kuti zvinoita kuti mazita emamwe mapakeji kana meta-mapakeji akasiyana zvakasiyana muDebian neArch.
Maonero angu uye yangu yekutanga kuonana
Ini ndinofarira chaizvo kumhanya kunotanga neLaptop, kubva apo Grub inopfuura kusvika iyo KDM yatanga inotora chete masekonzi mashanu (pasina kuwedzeredza uye neSATA HDD).
Chimwe chinhu icho munhu anojairira kukurumidza ndiko kumhanya uko mapakeji akaiswa achishandisa Pacman, inokurumidza chaizvo, kunyangwe ndichifanira kutsvaga nzira yekuchinjisa zvishoma kune zvandinoda, semuenzaniso, simbisa mhedzisiro yekutsvaga mavara kana chimwe chinhu chakadai nekuti sekuuya kwazvinoita zvinombooma kuwana chinhu.
MuArchLinux isu tatova neinowanikwa KDE 4.10.5 asi chimwe chinhu chisingazivikanwi chinoitika kwandiri, uye ndizvo Nepomuk yakamisikidzwa, painotanga kuverenga uye kuongorora kana paine mafaera matsva, iyo RAM yekushandisa inowedzera (pasina kubata chero chinhu) uye iyo inofara Vzvakanaka apedza anopfuura 1GB ari ega. Neraki ichi ndicho chinhu chiri munzira yekugadziriswa nacho KDE 4.11.
Kune rimwe divi, ini ndinonzwisisa kuti Arch Linux ndeye KISS uye nezvimwe zvese, asi ini handinzwisise kuti sei vasingatore nyore kuisa, chimwe chinhu chakareruka kunyanya kune chakanyanya kunetsa chikamu chekumisikidza, chinova chikamu. Kune mushandisi akajaira GNU / Linux, nzira yekumisikidza Arch ingaite senge yakapusa, asi kune mutsva, zvinoita kunge isiri kwandiri.
Uye hapana, ndiwo maratidziro andinoita nhaurwa iyi, iyo seyangu wandaishanda naye KZKG ^ Gaara akandiudza kuti: "Ngatione kuti zvinotora nguva yakareba sei." Ndine basa rakawanda pamberi pangu, kuverenga akawanda magwaro uye kuyedza kuti ndikwanise kuita zvese zvandinoita naDebian wangu ... Uye ichi chave chiri changu chidiki ToDo:
Isa mapakeji andinoshandisa zuva nezuva uye gadzirira iyo system.
Isa Webhu Server
Muchikamu chechipiri cheiyi yekuisa danda tichaona maitiro ekuisa Arch Linux tisingafe mukuedza .. 🙂
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Arch Linux + KDE Kuisa Log: Kuziva Misiyano
Mazuva ano ndinozviwana ndadzorera arch kubvira pandakachinja hdd yangu kuita ssd (haitangi mumasekonzi mashanu uye ndiri kuipaka zvakanyanya) padiki padiki vanoona kuti zvese zviri nyore, zvakanaka mushure Chekutanga kutya zvese zvakanaka (mushure memaawa ekumisikidza, izvo zvatingaite pasina yakanaka arch wiki).
Izvo zvese zvinotanga kana iwe uchida kusiya zvese nickel-yakafukidzwa, nekuti pano chinhu chinotanga kunakidza, iwe unoda rumwe ruzivo rwemberi uye funga zvishoma (mune arch ivo havapi chero chinhu kure), kuti uite sevhisi iyo inodzima bluetooth kana ichivhura kekutanga painotora awa rimwe uye kwemasekondi maviri anotevera. Ne systemd zvese zvakasiyana iwe unoda sevhisi uye iwe unoita yakapusa systemctl kutanga "sevhisi" uye ndizvozvo uye kana ukazvichengeta uye uchizvida pakutanga kwese system yako systemctl inogonesa "sevhisi".
Zvino hapana chinhu chitsva chinosvika pane desktop asi chinonakidza, nekuti unogona kusarudza chaunoda nekuchiisa, nezvirongwa zvaunoda uye zvese izvo pasina mapakeji asina basa anouya akafanogadzirwa (izvi zvine debian netinstall zvinoitwa zvakafanana asi musimboti weiyo system yatokura pachayo).
Wanga uchingoshandisa rairo rekunyaradza kwevhiki mbiri usingamire, iwe unoda kutsiva ye debian synaptic, iwe unoiwana uye unoguma usisiri kuishandisa (pacman inotibata isu tese nekureruka kwayo, nenzira, nekungo pfuura neiyo arch wiki uye kutsvaga pacman Ivo vatokuudza kuti ndeipi pasuru yekushandisa kupenda zvinobuda mupakeji inotsvaga), zvakadaro haurasikirwe nedebian (kunze kwekuti "zvine ngozi" kugadzirisa (iyo inopedzisira yaonekwa pachiratidziri chikuru che arch peji) Inoita kuti iwe upurure sisitimu, ai iwe unosuwa Debian, asi haudzoke, unotanga chiitiko zvakare sekunge "Edza Zvakare" yemumwe mutambo wakabatanidzwa).
Mwedzi mishoma gare gare haurangarire debian pane zvese zvinhu zvinoshanda rairo yekuraira inoita kuti udanane zvakanyanya mazuva ese uye pakupedzisira chimwe chinhu chinoshamisa chinoitika, panzvimbo pekukurudzira kugoverwa kwako kwaunoda kune ma newbies zvaunokurudzira mu debian, ubuntu, kutanga iwe , ... asi kwete arch, nekuti iwe unofunga kuti hazvishande kwavari kuti icho chinhu chaunosvika netsoka dzako uye haudi kuti vavenge linux nekuti arch ... is arch (yakafanana musikana anokuita benzi uye anongofunga iwe), haudi kuti ndikubvunze nguva dzese kuti zvese zvinoitwa sei uye zvishoma pane kana iwe ukaisa mukutsvaga iyo «archlinux» tag iwe unowana chiuru chemubvunzo maforamu kubva kuvanhu vanoita kunge vakabuda muUbuntu (usazvitore kwandiri zvakaipa asi mu linux ndivo "newbies" epasirese, neruremekedzo rwese pasi pano kuti kune avo vanondidzidzisa maawa ese). Zvinoshamisa kuti zvinoitika asi ichokwadi.
Rimwe zuva iwe une yako yakakwana sisitimu inoshanda mushe (kunyangwe iwo malaptop ekubata mabhatani asina kuitwa nemumwe munhu kuenda, kana kana vakaita havana kuigovana) uye iwe woitora wofunga… «inguva yekumomesa uye kutanga pamusoro kudzivirira iyo system Zara nekukanganisa kwangu », chishuwo chiri nyore chekuvandudza.
Mmmmm… .. ichi chinguva chakareba…. Ndinovimba mumwe munhu achiiverenga ...
Asi hapana chakachinja, iwe unotora kuiswa kubva pakutanga, sezvo grub isina kunaka uye vanhu vasingapinde linux kuburikidza nemeso avo kungoona kuti iwe unoyedza (mapatya ezita kumashure) burg, unoifarira asi yayo 0.1 masekondi akareba kupfuura zvazvinotora kutanga. Ivo vanoita kuti iwe unetseke kana usiri kudzokera kumashure
Iwe unogadzirisa iyo yekuchengetedza magetsi uye kusvika palaptop yako, iyo zvinoenderana nemugadziri bhatiri rinotora maawa matanhatu, harigare kwemaawa mapfumbamwe, haumire, harina kugadzirirwa zvakanaka…. Uye pakupedzisira iwe uri murudo rwehupenyu, iwe unongoda iyo pu **** ro Photoshop kuti ive neshanduro ye linux (uyo anoti Photoshop inoti solidworks kana zvakafanana) nekuti lightroom yakawa nguva refu yapfuura, kutanga kubva pamaoko eaftershot pro uye mushure merima .
Kuguma…. ndiko kupinda kwete kusiya…. Arch inoba linuxers uye hairege ivo vatize
Hehehe .. nyaya yakanaka .. Ndakaiverenga yakakwana 😛
Ndinobvumirana zvachose newe,
Ndiri kudanana naPACMAN (ehe, nemavara makuru nekuti iwo makuru mazwi, zvirinani kwandiri), ndinofunga kuti chero munhu anoziva pacman anomusuwa kana akasiya Arch
#pacman -Syyu [—-C ooo]
Iyo zvakare yakasimba uye haina kutyora zvakapusa kunyangwe vakataura zvakadii, panogara paine shanduko huru izvo zviriko, asi ndizvo zvinoitwa newiki nemaforamu.
Iyo yekudzidzira curve yakakura kwazvo, izvo zvaunodyara muArch ini ndinofunga kuti nazvo unoziva zvishoma zvishoma kuti zvinoshanda sei muArch,
Semaonero angu "ndishevedze kupenga kana chimwe chinhu chakanyanya" (ini handisi Arch radical sezvo Debian anoishandisa futi), asi iri distro inofanirwa kupfuudzwa nesu tese tinoshandisa Linux, ndiko kusvetuka kwepanyama vashandisi vazhinji vanoshandisa distros "Kunze kwebhokisi" kana chero chaunotaura, ndinofungawo kuti hazvisi zvevanhu vese, uye kana iwe uchida kuyedza Arch, distro iyo yakafanana zvikuru ndiArchBang, uye imwe yakaita saManjaro isinganyanye kutsamwa sezvo vachiedza.
Zvakanaka ndichati Arch-linux ndinoida, ndinovimba handina kukunetsa uye kuti hapana anotsamwa, ndiwo maonero angu izvozvi, zvinogona kuti mugore ndinoshandura pfungwa, hauzomboziva
Nhau yakanaka kwazvo, kune yangu archlinux ishungu uye ruvengo! kwaziso Ariki
Imwe yedzidzo dzakaipa dzakatyora HTPC yangu; Yakanga iri nguva yekutanga kuti ini ndiise arch (uye iyo chete nguva kusvika zvino), ndakafunga ndisina mhosva kuti tsime rakagadzirwa zvakanaka chimwe chinhu chawakaitirwa iwe kamwe uye unokanganwa nezvazvo: ehe, nemukana wekungovandudza chete kuti ugare uchiwana Chinhu chekupedzisira, icho chaisave chakadai, ikozvino ini ndaisa dhiki pairi, ndinovimba ndinayo kwenguva yakareba ndisina kuisa ruoko rwangu pairi. Icho chinhu chakangondishamisa, asi hei, ruzivo runoverengeka, uye pamwe palaptop yangu ndichamupa mukana rimwe zuva.
Ini ndiri mushandisi nyowani uye zvakandiomera, ndinogona kuita kuti zvinhu zvekutanga zvishande, zvese zvinoshanda chaizvo (kumiswa, tocuhpad, nezvimwewo), asi maneja maneja anowirirana neiyo wifi-menyu kana chimwe chakadai, saka handina kukwanisa kuimisa, uye Ini handikwanise kumhanya KDE, ini handizive kuti sei, asi ini ndinogona kumhanya mamwe madhesiki, kunyangwe Mate aine bhuru ine kupenya kudzora iyo inokuratidza iwe grey sikweya isina chinhu pane yekufambira mberi bar yekupenya kunokwira kumusoro kana pasi.
Zvikasadaro zvese zvinoshanda, asi izvo zvikanganiso zvinondiita kuti ndive neushingi.
Iwe uchati: # pacman -Syu
Mune maonero angu Arch Linux yakagadzirirwa vashanduri vayo ... XD
(kutaura nezve kunetsekana kwako kuti sei vasingatore iri nyore kuisa system.
Ndatenda, iyi ndiyo mhando yepositi yandinofarira.
Pindura kuna medina07
Kana uchitaura chokwadi, iri # pacman -Syu
Usakanganwa kuisa Yaourt kana Packer kuti ukwanise kuisa mapakeji kubva kuAUR ^ ^
Iwe haudi yaourt kana kurongedza kuti "ugadzire" chimwe chinhu kubva aur. Ingo tora pasi iyo tarball, bvisa uye pinda mukumisikidza makepkg -si.
Kuti izvo ... ngatione kuti zvinotora nguva yakareba sei. Kune rangu divi, ini ndiri kuyedzwa kuti ndidzokere kuArch asi… ndajaira kudzikama kwangu kukuru muDebian zvakare, ndine zvese kwazvinoda ini uye handifanirwe kumisikidza chero chinhu. Kunyangwe sezvavanotaura kuti Arch yakagadzikana (iyo inogona kuva), ndangariro dzichiri kudzoka kwandiri kuti mushure mekuvandudza neyakareruka pacman -Syu ... ipapo iyo kernel haina kushanda (hapana), ini ndaifanira kumisazve, nezvimwe.
Parizvino, zvirinani ndinamatire naDebian, ndiri kuita zvakanaka ... zero kutyisa, zero zvikanganiso, zero kushushikana, zvinonditendera kuti ndigare pasi ndishande ndisinganetse
Ndiyo versionitisitis…. unoziva. Kuve neyazvino vhezheni yeKDE uye chero package ... kernel ine kugadzirisa ... izvo zvinokwezva zvakanyanya. 😀
Hongu hongu kana ndikasakuudza kwete, yazvino vhezheni yeKDE uye yazvino Kernel ... chikuru chingave ichive nacho asi, ini ndinofunga kuti matambudziko kana izvo zvandinobaira kana ndichishandisa Arch (maonero ako) azvino zvakanyanya , Ini ndoda kugara uye ndisatsvage nekatsva bash kukanganisa, nekernel ichikanganiswa kana chimwe chinhu chakadai ... ndinofanira kugara pasi ndoshanda, sekuziva kwako, nguva inenge isingandikwanire zvachose.
Pamwe rimwe zuva ndinodzokera kuArch (pane desktop kana zvimwe zvakadaro) ... handizive, ndichaona 🙂
Ndiani angadai akafunga. Elav naKZKG ^ Gaara vachichinjana distros.
Iwe unoziva nezvenguva dzese dzandave ndiine Arch (1 gore hapana chimwezve) zvinhu zvese zvakandiwira ndakazvitsvaga nekuda kwekusaverenga. matambudziko maviri ekupedzisira andaive nawo aive
1- Shanduko kune zvinongedzo zvemabhainda mafolda ini ndinofunga nemamwe (ndakazvigadzirisa zvinoenderana newiki)
2- iyo grub inogadziridza (iyi yanga ichangobva kuitika) Ndakaigadzirisa nekuita pacman -Syu -force nekuti ini ndaitoziva kuti mapakeji aivei
uye hapana chimwe chinhu hachisi chinhu chekunyora kumba nezvacho saka ndinozvikurudzira. Iyo yakanaka distro uye zvakanaka nguva nenguva vanoita shanduko kune iyo systemystem iwe yaunofanirwa kuenda kuti uverenge nei isina kuvandudzwa asi kazhinji mhinduro iri nyore kupfuura iwe yaunogona kutarisira lol
Iwe unogona kundiudza iwe kuti wakazvigadzirisa sei? Ini ndakadzoreredza nhasi, sekugara, uye kana uchitangazve: Boom!
Chero bedzi ini ndadzorera Arch pamushini mumwe chete ini handina kumbofanira kuita chero chinhu kunze kwe: grub-install /dev/sda > _ <uye ini handisi kuwana mhinduro, ndingafarire rubatsiro.
une dhisiki rakakamurwa muviri bhutsu here kana kuti rakazvipira kune linux chete?
kushandisa debian mushure mekushandisa arch kwakafanana nekudzoka munguva.
@ tarkin88: kana iwe uine mamwe ma distros akaiswa shandisa grub yavo uye hauzove nematambudziko.
Ini ndinogona kukuudza kuti ndanga ndiine Arch Linux kwemakore, kutanga ini ndaive nayo mune mbiri bhuti neOS X ipapo ini ndakavaka PC chete yeArch uye kusvika zvino zero matambudziko, kunze kwekuti ini ndaigara ndichiverenga nhau kutanga kubva pawebhusaiti yavo ndisati ndaita iyo yekuvandudza kuitira kuti usave ununauti.
Ini ndinotenda kuti yega yega system yakagadzikana kusvika padanho rebasa remushandisi.
Mhoro, medina07, ndizvo chaizvo chikamu cheizvo KZKG ^ Gaara anoti, dzimwe nguva hauna nguva yekuverenga wozovandudza. Ini ndinoda huzivi hwaArch asi ini handina nguva kana chinangwa cheku "kurwa" nedistro. Pamwe, ndisati ndashanda uye kuva nemhuri, ndaigona kunge ndakazviita asi zvakadaro handina kuzviita, ndoda izvozvi.
Chero zvazvingaitika, ini ndinoona Arch senge inoshamisa distro uye inodikanwa nevashandisi vayo.
Nedanga rekeni, ini handifanire kupfuudza izvozvo kwauri, handiti?
Nekuti isu tinosimbirira kuve neazvino Linux
Gregory Mapfumo akadaro
ArchLinux Inotonga !!!
Archlinux rulez: p
Icho chikonzero nei zvichitora zvishoma kushandura ndechekuti kubvira Pacman 4.0 kurodha pasi package ine mafaera ayo anochinja nekuremekedza yapfuura yekuvandudza kana yepakutanga package ine mhedzisiro yekuti ivo vanorema zvishoma uye saka havapedze yakawanda bandwidth uye vanotora nguva shomana kurodha pasi uye kugadzirisa.
Ndakaita chinyorwa chakafanana pane yangu blog, kana mumwe munhu achida kuziva mafambiro andakaita kubva kuLinux Mint Debian Edition yaive -> http://sonlinkblog.blogspot.com.es/2011/05/diario-de-una-mudanza-adios-lmde-hola.html
Hmm, chave chimwe chinhu senge Delta ..
nguva yekumanikidza kushandisa Arch zvakare: p
Kune rimwe divi, zvinonyanya kushanda kwandiri kushandisa systemctl kushandura masevhisi eanopinda maneja, ndinotenda fedora nababa vake, tsvuku ngowani.
Uye zvakare Elav anodzokera kuArch, kunyangwe panguva ino ne KDE, ngatione kana nguva ino ichiripo! mukupedzisira iwe uri weDebianite ane versionitis, yako ichave yekushandisa SID xD.
Ini handinyatsoziva zvaunoreva kana iwe uchibvunza kuti nei arch linux isina nyore kuisa. pamwe neiyo yekumisikidza iwe unenge uine zvakakwana uye zvakafanira kuti uite iri basa .. kune rimwe divi kana iwe uchitaura nezvenyaya yekureruka kwekushandisa Arch ine nyore uye yakanyorwa zvakanaka inosimudza.
Isu tinofanirwa kubvuma kuti kune akajairika mushandisi (kana novice) iyo arch simaki ndeyekufungidzira, kunyangwe paine zvinhu zvakanyatsonyorwa uye pachezvayo zviri nyore kuzviisa nekoni, GUI inodiwa kuiisa uye kuunza vanhu vazhinji kudivi rechipenga.
Ini ndinofunga chinangwa cheArch chakarasika, kana vanhu ivavo vasingade kuisa Arch saizvozvo, ivo havazodi kuverenga vasati vavandudza, tevera iwo mirairo. Uye havazove nemoyo murefu panomuka dambudziko rekuenderera mberi nekushandisa Arch Ndosaka Manjaro iripo, uye Antergos asi ini handina kushandisa yekupedzisira.
uri pachokwadi icho ... arch haisi distro yemushandisi wekushandisa ... asi isati yave iine GUI iyo kunyangwe iri nyore yaibatsira
nahh ... izvo hazvidiwe .. chinodikanwa ndechekuti hurongwa hunoita zvirinani maererano nemamiriro ... kana uchiri kufunga zvaunotaura saka hauzive chinangwa chakakosha cheArch
Ini handidi iyo nyowani arch inosimudza (iyo yekare yaitaridzika kunge iri nani). Chinhu chinokurudzirwa zvikuru kuisa arch mumuchina chaiwo uye verenga zvakanyatsonaka, maitiro ekubatanidza neinternet uye grub pamberi.
Kune vatsva kana yeavo vakanakidzwa ne "nhanho nhanho" yekumisikidza senge yapfuura, ini ndinokurudzira kushandisa iyi script, iri pasi pekugadziriswa nguva dzose uye, mumaonero angu, yatove kushanda.
uye kushandiswa kwayo kunopfupikiswa mu:
Uye enda unotevera nhanho. : 3
To favorites. Ndinoyeuka pandakaisa Arch ndakapedza senge mavhiki maviri ndichinetseka kuti zvinhu zvese zvishande nemazvo.
Inokurumidza kutanga E4rat → https://wiki.archlinux.org/index.php/E4rat_%28Espa%C3%B1ol%29
Ivo vakatondikurudzira kuti ndipe iyo distro kuravira, sezvo ini ndakaona muwiki yavo kuti vane bhuku rakanyatsotsanangurwa nezve kuisirwa kwayo pakupera kweGNU nano uye neapo neapo kuraira. Zvakare, ini ndinovimba pacman inotaridzika zvakanyanya senge apt-tora uye iyo AUR yakanaka. Ona kana vanhu vari kuAUR vanogona kukubatsira kugadzirisa Iceweasel's Spanish language pack kuti ndikwanise kuishandisa (kana zvisina kudaro ini ndinoshandisa Parabola GNU / Linux-libre repos kugadzirisa kwechinguva dambudziko iro.
Kana ivo vakagadzira iyo yekumisikidza iyo yaive yakafanana OpenBSD maitiro, ichave iri yakanakisa, nekuti inokuratidza iwe kuti ndeapi mapurogiramu anodikanwa ekugadzirisa iyo system uye zvakakurudzirwa sarudzo.
Ndakaedza Slackware 14 uye zvaitaridzika sechinhu chinotonhorera mukati meuzivi hweKISS pasina kuita kuti zviome kune newbies, uye iyo Slackware koni ndiyo inotonhorera yandakaona kusvika zvino (ukangomhanya nayo, inokuudza majee, inoisa zvirevo zvekufungisisa , iyo slackpkg inokubatsira iwe paunenge wave kukwirisa kumusoro, uye yakareba etcetera).
archlinux ndiyo yakanakisa kunyangwe ini ndichida kuyedza slalk asi ini zvakadaro handisati ndanyatsoziva kutya kwangu asi handizive maitiro ekuisa zvinhu hehehe yekuisa ini ndinokurudzira 2 magwara akanaka kwazvo inova iyo yandakavimba nayo mazana enguva.
1- yekutanga maGespadas, anobatsira, akapusa uye ane akanakisa.
2- uye ino yakanakawo zvakare: http://redactalo.com/gnulinux-27/guia-de-arch-linux-%28tutorial-de-instalacion-configuracion-etc%29-%282013%29/
chero matambudziko ekumisikidza (zvisingawanzo asi zvichikwanisika) ingo tarisa iyo wiki hehehe
Heino Slackware 14 yekumisikidza gwara - hapana chinoshamisira, kunze kwekuve nyore kumisikidza kupfuura Arch:
Uye kana iwe uchida kuchipa iko kwekupedzisira kubata kuti chingo fanika, tevera matanho:
Payo pachayo haina kuomarara, asi kana iwe uchida, iwe unogona kuisa iyo slapt-tora yekuisa iwo mapakeji aine kutsamira.
Ini ndatove nerudo neSlackware yeiri nyore kwazvo kushandisa KISS yekumisikidza. Asi muArch, iwe unofanirwa kunge uine imwe nguva yekukwanisa kutevedzera nhanho dzewiki kune tsamba kuti usazofa uchiedza. Chii zvakare, kana isu tichiwedzera iyo slackbuilds repo >> https://blog.desdelinux.net/slackware-sbopkg-y-los-slackbuilds-instala-paquetes-facilmente/ << neavo ve slacky.eu, musanganiswa wakanakira iwe.
Slackware pachayo ndiyo KISS distro yandakawana pamwe chete kubva pakutanga. Ndinovimba kuiisa pamushini chaiwo kuti ndikwanise kuushandisa sezvandiri kuita neDebian yangu.
Chinhu chakanakisa uye chakaipisisa nezve Arch inharaunda yayo. Ichi chakakura kwazvo uye chinotora chikamu asi vamwe vashandisi vanogona kunge vari snobbish.
+1, mamwe anovenga kusvika ipapo
Yakanaka blog, pachezvangu ne KDE chinhu chekutanga chandinoita kudzima zvese Nepomuk indexing uye mamwe mahebhu ... Musiyano unoshamisa.
Pindura kuna AleQwerty
Iwo ma KDE mahebhu ndiwo iwo andinayo iye zvino mu chakra, ndeyekuti kana uchinge wajaira kune semantic desktop kana chero anotora kubva kwauri, kuti kana uine virtuoso uchidya 300 MiB yegondohwe.
Ini ndinofunga iwe uchadzokera kune yako Debian kana iyo versionitis ikasakusiya iwe wakadzikama uye iwe ukagara pasi kamwechete mune rimwe remazhinji ma distros awakaedza.
Pane imwe nguva pandakaona chirevo, ini handirangariri kana zvaive nekuda kwemablog mazhinji andaigara ndichiverenga nhau uye maonero evanyori, asi paive nemushandisi akataura zvakafanana neizvi:
"Kwete kutarisa pachigadzirwa chimwe chete uye chero bedzi paine dzimwe nzira Linux inoramba yakakamukana .."
Ramba uchinakidzwa neArch yako, ndinonzwa kugadzikana muDebian uye mune nyowani Fedora - zvakanaka, nekuda kwekunakirwa, iwo mavara 😉
versionitis yakanaka kusvika padanho, dzimwe nguva mushure mekugadzirisa iyo sisitimu yese kana kumwe kusarudzika kukamurwa, pandakangoshandisa iyo inotenderera uye chimwe chezviitiko izvo iwe zvausingade kudzokorora.
Parizvino, ini handisi kana kurota zvekuisa Arch Linux pamushini wangu chaiwo. Ini ndatova ndakagadzikana neSlackware uye Debian.
Kwandiri, zvishoma zvandinofanira kushandisa kugadzirisa zvinhu, zvirinani, ndosaka (pakati pezvimwe zvinhu) ndakamira kudzinganisa mbeva kudzingirira shiri, LXDE inouya yakagadzirira kushandisa, nekuti ine vhoriyamu kutonga uye mune "yakachena" mamiriro inotaridzika zvirinani aesthetically kupfuura XFCE, uyezve zvinondiyeuchidza zvishoma nezveWindows XP, yangu yandinoda OS.
Zvino zvauri mune arch unogona kuedza sddm 😉 (ndinofunga ndanga ndakurudzira kwauri imwe nguva uye waisakwanisa kuiisa muDebian kana ndikarangarira nemazvo)
Ndiri kufara neArch kana ndichienzaniswa na debain mangani mapakeji, chokwadi chaive chekuti kusvetuka kwangu kwandakafarira ndaive nezvose neArch asi zvese zvinogona kugadziriswa kubva kune imwe zvichienda kune imwe zvinoita kuti zviome uye zvinokusiya usina system. Mune debian icho chiri chake kugadzikana kwake kana iwe uchida izvo ndizvo zvakanakisa. Neichi chikonzero chimwe nechimwe chezvinhu zvacho asi ini ndoda arch yakawanda maererano nekumisikidzwa hahaha zvirinani zvinoita kunge zvakasiyana zvakare kana pandakashandisa yaive nematanho maviri imwe gui uye imwe ehl, kana ndaifarira iyo lci zvakanyanya hahaha.
Arch ine runako rwayo asi haisi yemunhu wese, kunyangwe yeavo vese munhu pc. Laptop inosarudza debian ubuntu desktop Ini ndinoda arch asi sekutaura kwandaita kune zvinakirwa zvezvinonaka.
Apt-get inogona zvakare kuiswa pane Archlinux, asi pachangu ini ndinoda pacman
Pindura ku xpt
Zvakanaka, kunyangwe ichiwanikwa mune repo ini ndinokahadzika kuti vashandisi vanowanzo shandisa zvakanyanya iyo package package
ArchLinux havana kuiisa asi vakandiudza kuti yakanaka distro--
Ini ndinofungidzira kuti hauna kuiisa nekuti iyo garca xDDDDD logo inoonekwa
Nguva pfupi yadarika ndanga ndine dambudziko neArch Linux yangu.
Pese pandinomisa laptop yangu, hapana dambudziko, asi pandinoidzorera kubva pakusimudza, ndine dambudziko rekuti pandinodzvanya pikicha muchirongwa kana kuvhura dura, hapana chinoitika, hapana hwindo rinovhura. asi ini ndinogona kufamba nyore nyore paiyo XFCE menyu kana kurudyi-penya pakombuta uye uone mamamenyu.
Asi hapana hwindo rinondivhurira, zvakaita senge Window Manager inotonhora.
Mumwe munhu anga akafanana? chero mhinduro?
Chinhu chimwe chete ichocho chakaitika kwandiri semwedzi mitanhatu yadarika uye ini handina kuwana mhinduro, ini ndaifanira kutendeukira mukumisikidza nekuisa Arch yangu kubva pakutanga. Zvino munguva pfupi yapfuura dambudziko riri kudzoka zvakare.
Zvakanaka, chokwadi ndechekuti Arch inokubata nenzira dzake. Iyo yekumisikidza haina kuomarara zvachose kana iwe uine yakawanda kana zvishoma yakajeka pfungwa yemabatiro ekugadzirisa zvikamu, maitiro ekuparadzanisa ne cfdisk.
Pacman uye Yaourt ndizvo zvese zvinogona kudiwa nemunhu .. Ndine mapakeji ese pamunwe wangu, uye izvo zvakanaka.
Kana zviri zve "classified" zvinobuda mumapakeji, kana iwe ukachinja Yaourt yePacman, inokuratidza iwe nemavara akasiyana repositi kunobva pasuru yacho.
ArchLinux yakagadzikana chero bedzi iwe uchiverenga, uye kuti haungoite zvinhu. Handisati ndambove nematambudziko akakura ndichigadzirisa uye izvo zvinondichengeta ndakadzikama. Ini ndangogadzirisazve kaviri kubvira ndichishandisa ArchLinux. Yekutanga yaive iyo yakandidzidzisa kuti ndisati ndagadzirisa sisitimu, ndinofanira kutsigira mafaera andichabata. Uye chechipiri ndechekuti anga aneta, ehe, zvitende kana kwete ...
Pindura kuna Leproso_Ivan
Kana iwe uchida zviri nyore kwazvo kuisa kugovera neakanakisa maficha eArchlinux, edza Chakra. Ndiyo yandinokurudzira kune vanhu vatsva kuLinux uye vanoida. Zvakadaro mazuva mashoma apfuura shamwari yakachinja kubva paWindows 8 kuenda kuChakra uye inoti haashandisi Windows zvakare muhupenyu hwake ...
@David Great nyaya! Ndanzwa kuzivikanwa mune zvese zvawataura! hehe Asi naMwari, "kuenda" kwete "kuenda", zvakarwadza zvikuru mushure menyaya yakataurwa zvakanaka kudaro. 😉
Ini ndiri weDebian neFedora mushandisi uye ini ndanga ndatokupa imwe Elav kuraira. Kana iwe uine versiontitis asi uri munhu anoda kugadzikana, shandisa FEDORA ne KDE: D.
Tarisa .. Uchave nemapakeji kune ekupedzisira asi pasina kumhanyisa njodzi yechimwe chinhu chinotyoka. Panguva ino Fedora yangu 19 ine 3.9.9 kernel uye KDE 4.10.4 uye mapakeji ese anogara achigadziridzwa kune achangoburwa kuti tikwanise kutaura nezvekuratidzwa uye kwakachengeteka kutenderera: D. Ndokumbira utarise kuti KDE paFedora inogara ichigadziriswa kune iyo nyowani vhezheni pasati papfuura mwedzi mumwe mushure mekuburitswa (kutaura nezve KDE).
Kuenda kune inotevera vhezheni yeFedora iri mukati mechikamu che fedup-ehl-network saka ini handina basa nerutsigiro. Chekupedzisira, ngatirege kukanganwa iyo nyowani vhezheni yeRHEL / CentOS 7, iyo vazhinji vedu tinotarisira kuti ndinotambura nazvo zviri nani kupfuura Debian (usatsamwiswe, asi ndozvazviri 🙂).
Ndinobvumirana newe, @petercheco. Zvakare, ini ndakaedza Slackware 14 uye nekutora kuverenga zvishoma kweSlackbook, uye nekutevera mugadziri mune nyore mode (cfdisk hachisi chibvumirano chakakura sekutaura kuti iyi yakaoma maitiro), yakandiisa ine KDE desktop nekukurumidza kupfuura nakare kose Ndakanga ndachaira muhupenyu hwangu kusvika zvino.
Chandinofarira kupfuura zvese nezveSlackware ndeye yakasarudzika uye inovaraidza koni, iyo yakandinyengedza nemajee ayo, zvirevo, zvirevo zvekufungisisa uye ne "Une tsamba" inoonekwa pandinopinda muTTY modhi. Chaizvoizvo inyanzvi ye distro, uye kana iwe uchinyatsoda chinetso chaicho, wobva wavaka yako yega distro mune yakachena Linux Kubva kuKutanga maitiro, wedzera maneja wepakeji iwe waunofarira zvakanyanya, gadzirisa kune zvaunofarira zvaunoda uye voila: distro zvechokwadi munhu.
Panguva ino, ndichave ndichirodha Arch's core mode kuti ndikwanise kuiteedzera muVirtualBox yangu yandakaisa paDebian Wheezy yangu, pamusoro pekutarisira RHEL / CentOS 7, iyo yandinotarisira kuti ine yekuvandudza yakafanana neFedora.
Dante Mdz. akadaro
Ini ndinofanira kunyatsoedza Arch Linux.
Pindura Dante Mdz.
Ini ndiri kudivi rakareruka reArch, ndinoreva, muManjaro, Arch Linux yevanhu hehehe
Zvakanaka, ikozvino ndiri paOS X, asi ndezvekuti ndashandisa kanguva kapfuura, kwezuva rakawanda ndanga ndiri muManjaro Xfce 😛
Manjaro Rules !!!
Hehe, ndiri kuenda kurodha pasi ruzha rwekupinda muUbuntu uye ndiri kuzoisa paManjaro, pese pandinotanga Manjaro ndiri kuzozvikonzera ndatenda XD
Ngatione kana ndikasangana nechando chando cheArch, nekuti ini ndakave nezviitiko zvakashata ndiri kwazvo pamucheto wechisvo.
Panguva ino, ndichave ndichinakidzwa ne VirtualBox yangu neSlackware 14 yangu neXFCE, inova yakanaka (isa slapt-pinda kuburikidza neslackpkg kuti usazove nematambudziko nekutsamira).
Iyo Bridge Linux inosimudza ine zvese izvo iyo yekare Arch yekumisikidza yaive nayo, pamwe nekuwedzera kwekumhanyisa script yekutanga iyo inogadziridza mapakeji, inogadzirisa chero diki diki-yekutyora joke iyo hyperactive vagadziri veArch uye ine Packer semumwe mutariri wepakeji maneja kuYaourt naPacman ( kunyange ichiisa zvakadaro). Bridge harina kudaro Manjaro (Arch's "Ubuntu") asi rinenge "riri kunze kwebhokisi" semaminetsi gumi ekumisikidza mushure memaminitsi makumi maviri kuisa kuti irambe ichimhanya pasina matambudziko muhafu yeawa (http://millertechnologies.net).
archlinux, maererano nemirairo, ndiyo yakanakisa distro yandakaedza kusvika parizvino, kuve nyowani ku linux mushure mekubata pamwe nemamwe ma distros uye kwete kugadzirisa mushe zvandinofarira ndine kusaziva, ndiyo yandakanzwa yakanakisa kubva paawa rekutanga, ndakafungidzira zvese nekukurumidza uye zvakandipa kudzidza kwakazara kwazvo, zvine chekuita nekumwe kugoverwa, kwaziso
Pindura kune keopety
Vashandisi veWindows vachinyepedzera kuyedza linux, vachitiza mu3, 2, 1 …… ..
Kwavari pane kutove Ubuntu kana Mint: p
kana Manjaro, kana Sabayon, kana chero imwe mushandisi-inoshamwaridzika distro
Ini ndinofunga une blog isiriyo ... panotove newebhusaiti yekutsika pa linux
Kubva kuNorway akadaro
Ose Manjaro neAntergos inzira dzakanaka kwazvo kune avo vari kutsvaga kureruka kweLinuxmint uye kusimba kweArch
Pindura uchibva kuNorway
Sezvo munhu wese achitaura nezvezviitiko zvavo naArch .. .. sei usingapfuure yangu .. 😛
Kusvikira pasingasviki gore rakapfuura, ini ndaive W chaiye mushandisi .. ..yangu yekutanga kusangana neGNU-Linux, yakabva paruoko rwekuona yakabviswa Debian, isina gui, kana chero chinhu .. .. ndakafarira ndikaenda ku edza rombo rangu paese pakombuta yangu yedesktop uye netbook..pazvose ndakaisa LinuxMint..yokutanga neCinnamon, imwe ine Mate .. .. Ndainakidzwa, ndakadzidza, ndakagadzirisa zviri nyore .. uye ndakatanga kuda kudzidza zvakawanda. .uye uwane zvakanyanyisa kubva kumachina angu, kuti anokurumidza, kuti vanonzwa kunge vakasarudzika kwandiri .. ..uye ndiwo masanganiro andakaita naArchLinux ..
Vanomubata sekunge araswa chete kune vanhu vane hunyanzvi munyika ino .. .. mushure mekutora zvinyorwa zvishoma, uye kuverenga zvekare gwaro rekumisikidza kashoma .. Ndakatanga kurwisa netbook rangu .. ..uye ndaida iyo! .. ... munguva pfupi ndakanga ndiine Arch yangu..yakadzvanywa, asi yaishanda .. Ndakaibatanidza neyakavhurika OpenBox .. ..zvizhinji zvemashiripiti..zvimwe zvakagadziriswa..configurations yekuita kwese kwese .. .. ndakaenda ku ndine chete ArchLinux mumakina ese ari maviri mumavhiki maviri..seyese system .. ..uye pano ini..ne imwecheteyo yekumisikidza .. .. Pasina chero dambudziko (kunze kweizvo zvakajairwa kune iyo ATI bhodhi ..) .. isina tsaona, uye zvese Zvinoitika kwandiri kuti ndiite .. zvinogona kuitwa nekungoverenga zvishoma .. .. shanda, dzidza, tamba .. zvese pamushini wangu neArchLinux .. uye pano ndinogara .. ndakanyarara .. ndakanyarara .. .. uye kubatsira chero anokwanisa .. ..kuti nharaunda inokupa .. vanoda kutora chikamu nekubatsirana .. ..
Muzvokwadi, munhu wese anoedza kusvikira awana "yekupedzisira yeshangu."
Kune vanhu vasina zororo, vamwe vadiki kwazvo uye vamwe havana kunyanya kuita sevadiki. uye kamwe kamwe nerumwe rubatsiro rwakawedzerwa (iyo U., shamwari, mudzidzisi, nezvimwewo) asi kwandiri ndinogara muguta diki kwazvo uko 99.9% inoshandisa Windows uye kana munhu akavabvunza kana vakaedza kana kuziva Linux vanotenda Chii rudzi rwechikafu, kana kana ndiri muchitoro chemakomputa, ndinovabvunza nezveMAC, havana zano rekuti chii, (ndinofanira kuvaudza nyaya yacho) zvange zvakandiomera… asi Googling ndakadzidza .
Gore rapfuura ndakasvetukira kuLinux, zvakanyanya nekuda kwekuda kuziva uye kufinhwa neWindows. Ini ndanga ndichiyedza kuwanda kwemari yavanofunga seyakanakisa uye kugadzikana, (kwakakomberedza makumi matatu) Ndakaidzikisa, ndikaiisa ndikarohwa ndikagumbuka kana mushure mekurwira kwakawanda, haina kushanda, yakarovera kana ini ndaisakwanisa. tsvaga chero chinhu ...
Ipapo iyo desktop desktop ... ini ndaida KDE (uye havachandibudise mazviri), ipapo ndakaedza Mint KDE, (zvakandibatsira zvakanyanya), Netrunner (haina kugadzikana kwazvo), Chakra (yakanaka kwazvo), OpenSuse (ndakaifarira) Sabanyon, Mageia, nezvimwe ... uye ini ndakazopedzisira ndabata Kubuntu (Ndiri pa13.04 64 zvishoma) nekuda kwenzvimbo dzekuchengetedza uye nyore kwekuisa iyo .deb
Saka ndinokorokotedza avo vanoita kuti zviomere zvishoma nePacman, Yum, nevamwe; Ndakagara neiyo «sudo apt-get ...» uye pandakanga ndichida kudzidza dzimwe nzira dzekushanda pamwe neiyo terminal, ndakasvika padanho randaishaya rairo kana ndakanga ndisina rubatsiro, saka ini ndinoenda nenzira yakapusa, kwandinowana yakawanda yerubatsiro, nekuti panyama… Hakuna.
Svika pakuziva yemahara software inowanikwa mune iyo bhaisikopo "Iyo Yemagariro Network"
Maitiro ekurodha mumhanzi kubva kuGrooveshark paLinux